HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
AFAKA MAMAKY Baiboly ianao, ao amin’ny tranonkala jw.org, ao amin’ny Internet. Misy fiteny 50 eo ho eo azo isafidianana. Misy lahatsoratra ara-baiboly amin’ny fiteny 500 mahery koa ao.
AFAKA MIJERY video amin’ny tenin’ny tanana ianao, amin’ny fiteny 70 eo ho eo.
AFAKA MANOVAOVA ny fiteny ao amin’ilay tranonkala ianao, satria misy hatramin’ny an-jatony izany.
AFAKA MIHAINO tantara mahaliana nalaina avy ao amin’ny Baiboly ianao.
AFAKA MANARAKA tantara an-tsary ianao, momba ny zava-niseho resahin’ny Baiboly.
AFAKA MIJERY video maoderina sy fahiny ianao. Hanampy anao izany hiatrika ny fiainana sarotra ankehitriny.
AFAKA MAKA lahatsoratra sy boky ary raki-peo ianao. Samy maimaim-poana avokoa ireo.
AFAKA MIKAROKA hevitra isan-karazany ianao, ao amin’ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah. Misy foto-kevitra maro samihafa ao, amin’ny fiteny 100 mahery.
“Hoatran’ny lasa niadiady foana izahay mivady, indrindra rehefa nanan-janaka. Tena mila fanampiana izahay, satria mba tiako ho sambatra ny tokantranoko”
“Fahendrena no ilaina mba hanorenana ny trano, ary fahaiza-manavaka no ilaina mba hahamafy orina azy.”—Ohabolana 24:3.
AFAKA MANAMPY ANAREO NY JW.ORG
Midira ao amin’ilay hoe “Mpivady & Ray Aman-dreny.” Misy torohevitra maro ao. Hanampy anareo, ohatra, izany mba . . .
hahay hitaiza an’ireo zanakareo
tsy hifamaly foana
Misy hevitra tsara be dia be koa ao amin’ilay boky hoe Ny Tsiambaratelon’ny Fahasambaram-pianakaviana. Na ireo vao mikasa hanambady, na ireo efa mikarakara ray aman-dreny zokiolona, dia samy voaresaka ao.
(Azo jerena ao amin’ny www.jw.org/mg io boky io, ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > BOKY & BOKIKELY)
“Ny zanako ny ahy no zava-dehibe indrindra amiko. Tiako ho voataiza tsara izy ireo, amin’izay mba ho reharehako any aoriana any”
Midira ao amin’ilay hoe “Ankizy.” Misy kilalaon-tsary, video, tantara an-tsary avy ao amin’ny Baiboly, ary zavatra maro hafa ao. Hanampy anao izany mba hampianatra ny zanakao . . .
tsy hiadiady amin’ny ankizy
(Jereo ao amin’ilay hoe FAMPIANARAN’NY BAIBOLY > ANKIZY)
Azo vakina amin’ny ankizy ireo boky hoe Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly sy Mianara Amin’ilay Mpampianatra Lehibe. Feno sary tsara tarehy ao amin’ireo boky ireo.
(Azo jerena ao amin’ny www.jw.org/mg ireo boky ireo, ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > BOKY & BOKIKELY)
“Tiako aho raha mba mahita torohevitra momba ny fianarana, ray aman-dreny, namana, ary resaka fitiavana. Izaho tsinona efa mba lehibe ihany, dia tsy tiako mihitsy ny atao hoatran’ny zazakely”
“Mifalia ry tanora dieny mbola tanora ianao.”—Mpitoriteny 11:9.
AFAKA MANAMPY ANAO NY JW.ORG
Midira ao amin’ilay hoe “Tanora.” Misy lahatsoratra sy video maro ao, hanampy anao...
raha tsy mana-namana ianao
raha misy manahirana anao any am-pianarana
raha misy mampijaly na manadala ianao
Misy fanontaniana 77 valiana ao amin’ny Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa, Boky 1 sy 2.
HO AN’IZAY TE HIANATRA BAIBOLY
“Te hianatra Baiboly aho, fa tsy haiko hoe ahoana no hatao”
“Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana.”—2 Timoty 3:16.
Jereo Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Marina tsara sady mazava ny fomba nandikana an’io Baiboly io.
(Jereo ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > BAIBOLY)
Azonao atao ny miditra ao amin’ilay hoe “Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly.” Be dia be ny fanontaniana valiana ao, toy ny hoe “Sazy avy Amin’Andriamanitra ve ny Loza Voajanahary?”, sy ny hoe “Oviana i Jesosy no Teraka?”
Midira ao amin’ilay hoe “Hangataka Hianatra Baiboly” raha tianao ny hianatra Baiboly maimaim-poana.
(Tsindrio ilay soratra hoe “Hangataka Hianatra Baiboly” eo amin’ny pejy fandraisana)
“Tsy namaky Baiboly intsony aho satria tsisy azoko izay novakiko. Gaga anefa aho rehefa nianatra ilay boky hoe ‘Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?’ Hay mora azo sady mazava be ny Baiboly!”—Christina.
MANANA FANONTANIANA MOMBA NY VAVOLOMBELON’I JEHOVAH VE IANAO?
Midira koa ao amin’ilay hoe “Fanontaniana Fametraky ny Olona.” Fanontaniana maro no valiana ao, toy ny hoe “Nahoana ianareo no mitsidika ny olona efa manana ny fivavahany?”, sy hoe “Avy aiza ny vola ampiasainareo?”
(Jereo ao amin’ilay hoe MOMBA ANAY > FANONTANIANA FAMETRAKY NY OLONA)
Olona 700 000 eo ho eo isan’andro no mijery ny tranonkala jw.org ao amin’ny Internet. Nahoana raha mba miditra ao koa?
Hizara Hizara Ilay Tranonkala ho An’ny Olon-drehetra!
Misy Amin’ny Fiteny 1000 Izao ny Zavatra ao Amin’ny JW.ORG